Techmụ nwanyị Tech: Zute Caroline Esinam Adzogble, Onye Ntorobịa Mahadum nke Africa
Ebe E Si Nweta: blackbusiness.com
Obi abụọ adịghị ya, Africa bụ ebe obibi nye ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma na-emebi ọnọdụ a. Akụkọ ihe ịga nke ọma ha na-arịọ ka a gwa ha ka ha gbaa ume ma wulite olile anya n'ọgbọ na-eto eto bụ ndị a na-agwabeghị naanị mba mana ndị nrọ ha na agụụ ha kwụsịrị.
Na nke ahụ, anyị ga-achọ imechi afọ site na ibi na ezigbo ndụ ihe atụ nke okwu ahụ bụ “are bụ ihe ị na-eme onwe gị”. Maka ndị na-anụbeghị banyere Caroline Esinam Adzogble nke Ghana, lee ezigbo ohere iji hụta nwayi wuru onwe ya dịka ọ dị taa.
Afọ 28 dị ịtụnanya
Caroline Esinam Adzogble bụ onye ọchụnta ego, onye gụrụ akwụkwọ na-agụ agụụ, onye na-enyere ndị mmadụ aka, na onye na-akwado nkwado maka itinye ndị ọzọ ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị na teknụzụ.
Na 28, mgbe ọtụtụ mmadụ ka na-achọpụta ndụ mgbe ha gụsịrị akwụkwọ na mahadum, ụfọdụ amalitelarị usoro na-esote iji gụkwuo agụmakwụkwọ ha mgbe ụfọdụ na-ewu azụmahịa ụwa, nwa agbọghọ a wuru ihe a pụrụ ịkọwa dị ka onye na-emekọ ihe ọnụ.
A kọwawo onye guzobere Potters International College nke dị na Accra, Ghana, Adzogble dị ka nwanyị kachasị ọdụdụ n'Africa inwe ụlọ akwụkwọ tozuru etozu. Olee otú o si rute n'ọkwa a dị elu?
Njem ahụ dị ugbu a
na- Ajụjụ ọnụ, o kpughere na amụrụ ya n'ezinụlọ dị umeala n'obi nke gụrụ dị ka onye na-adịghị mma megide ya. Otú ọ dị, o ji obi ekele jiri ohere ahụ nke ndị mụrụ ya nyere wee mepụta ohere sitere na ya.
Ọ ghaghị ịlụ ọgụ megide nkwenye ndị obodo banyere ụdị ọrụ na nrọ ọ họọrọ.
“Njem m adịghị mfe. Ọtụtụ ndị chere na m bụ onye nzuzu, abụ m nwata, na-adịkarị mkpa, na nnukwu nrọ. O were ndị mmadụ oge tupu ha anabata m. Agbasiiri m ike na ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụghị ugbu a n'ihi na akwụsịrị m ikike m ka a kwanyere m ùgwù, " ọ kọrọ.
N'agbanyeghị na ọ chọrọ ịbụ dọkịta mgbe ọ dị afọ 19, ọnọdụ akụnụba nke ezinụlọ ya mere ka nrọ ahụ kwụsị. Ghara imeri ya, o kpebiri ịchụso ọrụ na Ozi na Teknụzụ.
Potters College na oru ndi ozo
Na 2016, ọ hiwere Potters International College, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe ụmụ akwụkwọ na-eto eto na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nwere ike zụọ azụ na nkà iji kwadebe ha maka ọdịnihu nke izu.
Nchịkwa azụmahịa, nkwukọrịta na mgbasa ozi, ahịa, mmepe weebụ na ngwanrọ, yana imepụta ọla bụ ụfọdụ n'ime mmemme mmemme ahụ.
Caroline Esinam Adzogble bụkwa onye guzobere na onye isi nke Caroline Group, otu nzukọ na-eme ka agụmakwụkwọ dị ọnụ ala ma nwee ike ịnweta ndị Africa, nwere ntọala na Ghana, Kenya, USA, na UK; na ngalaba-onye guzobere Mahadum Caroline, ụlọ ọrụ na-abụghị agụmakwụkwọ.
Ọ na-eje ozi ugbu a dị ka onye isi ala nke Mercy Heart Foundation, ụlọ ọrụ na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịmụ akwụkwọ gafee mba ofesi
N'oge na-adịbeghị anya, ọ kwupụtara mmekọrịta dị oke mkpa na mahadum ọgwụ mahadum dị na United States- Mahadum St George. Nke a dị egwu ihe nwetaObi abụọ adịghị ya na ọ nwetalarị otuto dị ukwuu ọ kwesịrị ka ọ na-abanye n'okporo ụzọ ọhụrụ na njem ọrụ ya.
N'ikwu okwu banyere agụụ ya ime mgbanwe mmụta-maara ihe, kwuru,
“Ihe m kweere bụ na onye ọ bụla kwesịrị inweta agụmakwụkwọ ụwa n'agbanyeghị afọ ndụ ya, agbụrụ ya, ụcha ego ya, na ego ya. Anọ m n'ọchịchọ ịkwalite Mmụta n'Africa na karịa, iji mee ka agụmakwụkwọ bụrụ nke kacha dị mfe ma dị ọnụ ala maka ụmụ akwụkwọ nọ na mba 146. "
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọchụnta ego enwetala ọdịda na oge ụfọdụ na njem ha ihe na-eme ndị na-aga nke ọma ka mkpebi ha siri ike ịnọgide na-agbanye. Ndụmọdụ Caroline Esinam Adzogble nyere ụmụ agbọghọ na-achụ nta ego bụ nke a:
“Ike agwụla gị; ị na-agbanye aka. Enwere m nrọ ma ana m ebi ya kwa ụbọchị. Bie eziokwu gị ma nwee ọmịiko n’onwe gị. Nke kachasị bụ na ịkwado ụmụ nwanyị ndị ọzọ. ”